လက်တွေ့ – Grab Love Story
by phyu May 2, 2021
” တူတူ … တူတူ … တူ ……. ” ရုတ်တရက် ဖုန်းသံမြည်လာ သဖြင့် သော်တာတွန်း အတွေးစများ ပြတ်သွားရ၏။ ဖုန်းအား ဖွင့်ကြည့်ရာ ပိုးရတီ နေသည်မို့ စိတ်ထဲ တမျိုးလေး ခံစားလိုက်ရ ပြန်သည်။ အရင် ယောင်္ကျား စိတ်ဖြင့် ပိုးရတီ အပေါ် ချစ်ခဲ့ ပေမယ့် ခုချိန် ယောင်္ကျားစိတ် ပျောက်ကွယ် နေတော့၏။ ” ပြောလေ … သဲ ” ” ဟာ … လေသံက စိမ်းလှချည်လား … သော်သော် ရယ် ” ” မဟုတ်ပါဘူး … ဒီရက် သော်သော် … စိတ်ညစ် နေလို့ပါ ” ၂ယောက်သား ခဏ ငြိမ်သွား ကြရင်း ပိုးရတီ ဘက်မှ ဖုန်းချ သွားသည်။ နေ့မှရက် ရက်မှလ သို့ ကူးပြောင်းလာရာ ပိုးရတီနှင့် သော်တာထွန်း တို့မှာ အနေဝေးကာ သွေးအေး သွားတော့ ၏။ မြို့ထဲ ၂ကြိမ်လောက် ဆုံခဲ့ပေမယ့် သော်တာထွန်း မှာ အရင်လို ပုံစံ မဟုတ်တော့ပဲ မိန်းကလေး အဝတ်စားဖြင့် ခပ်တည်တည် ဆက်ဆံ သဖြင့် ရင်ထဲ နှင့်နေအောင် ခံစား လိုက်ရပြန်သည်။ ပိုးရတီ တယောက် ဖုန်းထဲ မြင်နေရသော သူမနှင့် သော်တာထွန်း ပုံများအား ကြည့်ရင်း တပုံခြင်း ထိုင်ဖျက်နေသည်။ ၂ရက် ဆက်တိုက် ငိုထားသဖြင့် မျက်နှာလေး မို့တက် လာရ၏။ မိန်းမချင်း ချစ်ခဲ့မိ သဖြင့် နောင်တ ရလို့ မဆုံးမိ။ ခုထိ သူမ အဖုတ် လေးအား ကြည့်မိတိုင်း ကာမ အထိအတွေ့ များက သူမ ရင်ကို နာကျင်စေ၏။ ဖုန်းထဲ ပုံများ အကုန်ဖျက် ကာ ဧည့်ခန်း ဘက် ထွက်လာခဲ့၏။ ဧည့်ခန်းထဲ ထိုင်ရင်း တစ်ယောက် ထဲ ဟိုတွေ ဒီတွေး တွေးနေမိ သည်။
” သမီး … ပိုးရတီ် ” ” ဟမ် … မာမီ ” ဘေးနား ရပ်ကာ ခေါ်လိုက်သော မိခင်ဖြစ်သူ အသံ ကြောင့် အတွေးများ ပျက်ကာ ကမန်းကတန်း ထူး လိုက် မိသည်။ ” မာမီ … သတိ ထားမိနေတာ ၃ရက် ရှိပြီ … ဘာဖြစ် နေတာလဲ … ပြော ” ” အဟင့် …..ပိုးနဲ့ သော်သော် … ပြတ်သွား ကြပြီ ……..မာမီ ” ” အော် ” သမီးဖြစ်သူ စကားကြောင့် ဒေါက်တာ ဆုရတီ ရင်ထဲ အလုံးကြီး ကြသွားရ၏။ သူမနှင့် ဦးစိုင်းမောင်တို့ ဒီရက် အပြင်တွင် ခိုးတွေ့ နေကြသဖြင့် သမီးဖြစ်သူ သိများ သွားလား ဟု စိုးရိမ် နေမိသည်။ သူမ ဖေါက်ပြန် သည့် ကိစ္စအား ပိုးရတီ အစောကြီး ကတည်းက သိနေမှန်း မသိရှာပေ။ သမီး ဖြစ်သူအား နှစ်သိမ့်ကာ ဆေးခန်း သွားဖို့ ပြင်ဆင်ရင်း ခဏအကြာ ကားလေးဖြင့် ထွက်ခွာ ထွက်ခွာ သွားတော့၏။” ပိုး ” ” ရှင် … ဆရာ ” ” ကားပျက် … လို့ဆို ” ” ဟုတ်တယ် … ကျောင်း နား မရောက်ခင် ထိုးရပ် ……သွားတာ … ပြင်နေကြ … ကားဝါးရှော့ ကို … ဖုန်းဆက် ယူခိုင်း ရတယ် … ၂ရက် လောက် ကြာမယ် ပြောတယ် … မာမီ ကိုပဲ … ကျောင်း လာကြိုဖို့ ပြောရတော့မှာ ” ” အော် … ပိုး ရယ် … ကျနော် … အကြိုအပို့ လုပ်ပေးမှာပေါ့ … ခု … နေ့လည်စာ … သွားစားရအောင် … လိုက်ခဲ့နော် ” ပိုးရတီ တယောက် သော်တာထွန်း နှင့် ဝေးခဲ့ပြီး စိတ်ပြေ လက်ပျောက် သူမ ချစ်ခွင့် ပန်သူ များထဲမှ ဆရာ ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ သိန်းဇံအား အပျော် တွဲနေ ရင်း မထင်မှတ်ပဲ ငြိစွန်း သွားရတော့ သည်။ မိန်းမ ချင်းသာ ဆက်ဆံ ဖူး သော ပိုးရတီ တယောက် ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်နှင့် တွေ့ သောအခါ မခံစား ဖူးသော ကာမ အရသာလေး များ ရရှိ နေရ၏။ မိန်းမချင်း ချစ်ကြိုက်မိ သည်ကို နောင်တ ရမဆုံုးဖြစ်နေရှာသည်။ ခဏအကြာ ကားဖြူလေးမှာ ဆေးကျောင်း ကားပတ် ကင် ထဲမှ ထွက်လာကာ မြိုထဲ အစားအသောက် နှင့် တွဲဖက် ရသော တည်းခိုခန်းသို့ ဦးတည်နေ၏။
ပိုးရတီ တယောက် ဒေါက်တာ သိန်းဇံနှင့် ၇ကြိမ် ၈ကြိမ်ခန့် ရောက်ဖူး သော် လည်း တည်းခိုခန်း ကောင်တာ ရှေ့ အခန်းသော့ ယူကာ အပေါ်ထပ် တက်တိုင်း ရင်ခုန် နေရသည်။ ယူနေကြ အခန်းထဲ ရောက် သည်နှင့် သူမ အတွင်းခံ ဘောင်းလီ လေး အား ချွတ်ပေးရာ ဒေါက်တာ သိန်းဇံမှာ ကုတင်ပေါ် ထိုင်းရင်း ဘောင်း ဘီဂွလေး အား တရှုံ့ရှုံ့ နမ်းနေ တော့၏။ ပိုးရတီ မှာ ဒေါက်တာ သိန်းဇံရှေ့ မျက်နှာချင်း ဆိုင် မတ်တပ်ရပ်ရင်း ထမိန်အောက်နားစ လေးအား ဗိုက်ထိ လှန်ကာ စောက်ပတ်လေးအား ဖြဲပြ လိုက်ပြန် သည်။ဒေါက်တာ သိန်းဇံ တယောက် အမွှေးရိတ် ထားသော ပန်းရောင် စောက်ပတ်အုံ အား ကြည့်ရင်း ဘယ်လက်ဖြင့် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအား နှာခေါင်းဝ တေ့ရှုကာ ညာလက်မှ ဘောင်းဘီ ဇစ်ဖွင်ရင်း လီး အား ထုတ်ကာ ပွတ်သပ် နေပြန်၏။ ပိုးရတီ မှာ လည်း သူမရှေ့ မြင်ကွင်း ကြောင့် စောက်စိ အရည်ပြားလေး တင်းမာလာ ကာ အဖုတ်အုံကြီး ကြွတက်လာ တော့သည်။ ဒေါက်တာ သိန်းဇံမှာ လီးကြီး မာထင် လာသည်နှင့် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအား ပါးစပ်ဖြင့် ကိုက်ကာ ထရပ် လိုက်၏။ထမိန်အား လှန်ကာ စောက်ပတ် လေး ဖြဲထားသော ပိုးရတီ ခါးအား ဘယ်လက်ဖြင့် ဝိုက်ဖက် ကာ ညာလက်က လီးအား ထိန်းကိုင်ရင်း ဒစ်ဖြင့် စောက်စိလေး အား ထိုးကလော် နေသည်။ ” အ ……. အ …..ဆရာရယ် …… ရှီးးးး ………ကျွတ် ကျွတ် ” ပိုးရတီ စုပ်သပ် ညည်းရင်း ခေါင်းလေး မော့တက် သွားရ၏။ သူမ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအား ရှုပြီး ဂွင်းထု ပြတိုင်း စောက်ပတ်လေး ထဲမှ တဆစ်ဆစ် ဖြင့် ယား နေ တတ်သည်။ မျက်နှာချင်း ဆိုင် မတ်တပ် ရပ် လျက် အနေထားဖြင့် စောက်စိအာ ဒစ်ဖြင့် ထိုး ကလော် ခံရစဉ် စောက်ရည် များ ထွက်ကျ လာတော့ ၏။
ဒေါက်တာ သိန်းဇံမှာ ကိုယ်လုံးလေး တဆက်ဆက် တုန်ကာ စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်နေသော ပိုးရတီ အား ကြည့်ရင်း စောက်ခေါင်း ပေါက်ထဲ လီးထိပ် သွင်းကာ ဆွဲလိုး ပစ်သည်။ ” အ …… ဆရာ ရယ် …… အား …….အိုးးး……. ဆောင့် ဆောင့် …..အမလေး ………………… မြန်မြန် …. ဆောင့် လိုး ပါ ……. အဟင့် …… အား …. ပြီး ……… ပြီး ….. ထပ် ထွက် တော့ မယ် ……..ရှီး ………. မြန် မြန် …….. အ …….အားးးးးး ………. ပြီးးး ပြီးးး ……. ပြီး ပြန် ပြီ ….ဟူးးးးးးး ရှီးးးးးးးးးးး ” ပိုးရတီ တယောက် ဒေါက်တာ သိန်းဇံ နဖူးအား တဖွဖွ နမ်းကာ ပုခုံး ဆွဲထားသော သူမ လက်တွေလည်း အားလျော့ သွားရ ရှာသည်။စောက်ခေါင်း အတွင်း သား များက လီးအား အလိုလျောက် ညှစ်ပေး နေ သဖြင့် ဒေါက်တာ သိန်းဇံလည်း အချက် ၃၀ခန့် ထပ်ဆောင့်ကာ လရည်များ ပန်းထည့် လိုက်တော့၏။ လီးကြီး ဆွဲထုတ် ပြီးသည်နှင့် ပိုးရတီအား ကုတင်ပေါ် ပက်လက် လှန်တင်ကာ လိုးပြီးကာစ စောက်ပတ် နီတာ ရဲလေးအား လျှာဖြင့် အပြားလိုက် ပင့်ယက် နေသည်။ စောက်ခေါင်း ပေါက်လေး ထဲမှ အကျိအချွဲ များ စီးကျလာရာ ဖင်ဝ လေးနား အရောက် လျှာဖြင့် သိမ်း ယက်ပေးလိုက် သဖြင့် ပိုးရတီ ဖင်သားစိုင်လေး ကြုံ့သွားကာ ပေါင်တန်များ တဆက်ဆက် တုန်ခါ နေတော့၏။ ၂ယောက်သား ကုတင်ပေါ် ခဏ အမော ဖြေပြီး တည်းခိုးခန်း အောက်ထပ် ဆင်းရင်း ထမင်း အတူစားကာ ဆေးကျောင်းသို့ ပြန်လာ ခဲ့ကြ၏။ညနေပိုင်း ပိုးရတီ တယောက် သူမ အတန်းချိန် ပြီးသည်နှင့် ဒေါက်တာ သိန်းဇံအား အိမ်သို့ လိုက်ပို့ ခိုင်းတော့သည်။ ကျောင်းက ထွက်လာသည်နှင့် ကားလေးမှာ မောင်းနေ ကြ လမ်းအတိုင်း မောင်းရင်း တဖြည်းဖြည်း ပိုးရတီတို့ ရပ်ကွက် ထိပ်နား ရောက်ရှိ လာ၏။ ဆိတ်ငြိမ် ရပ်ကွက် လေးမို့ လူသွား လူလာ မရှိပဲ ကားတစီး တလေသာ ရပ်ကွက် ထဲမှ အပြင်သို့ ထွက်လာသည်ကို မြင်နေရသည်။ ” ဟင် … နေ့လည်က … တခါ လုပ်ပြီး ပြီလေ … ဆရာကလည်း ” ” အင်း … ဒီနေ့ … ဘာဖြစ်မှန်း မသိဘူး … ကြည်ပါဦး ………… ပိုး ရယ် ” ဒေါက်တာသိန်းဇံမှာ ပိုးရတီတို့ လမ်းထိပ် သစ်ပင်ကြီး တပင်အောက် ကားထိုးကာ စကားပြောရင်း ဘောင်း ဘီ ဇစ်ဖွင့် နေ၏။
” ဟွန့် … အဲ့ဒါပဲ စဉ်းစားနေတယ် … ပိုး … ဒီနေ့ … လက်တွေ့ … ပရယ်တီကယ် ဆင်းရတာ … ပင်ပန်း နေပြီ ……ဆရာရဲ့ ” ” အင်းပါ … သိပါတယ် … ပိုး ရယ် ” လူရိပ် လူခြေ ကြည့်ရင်း ကားမှန်များ ပိတ်ပြီး ပိုးရတီ လက်တဖက်အား ဆွဲယူကာ ဘောင်းဘီထဲ မှ ထုတ် ထားသော လီးပေါ် တင်ပေး လိုက်သည်။နူတ်ခမ်း ချင်း တေ့စုပ်ရာ ပိုးရတီ တယောက် ပါးစပ်လေး ဟပေးရင်း လက်ချောင်းလေး များက လီးအား ဆုပ် ကိုင်ကာ ဂွင်းထု ပေးနေ တော့သည်။ ၅မိနစ် ခန့် အကြာ သူမ လက်ထဲ ဒေါက်တာသိန်းဇံ လီးကြီး တဒုတ်ဒုတ်နှင့် တင်းကနဲ့ တင်းကနဲ့ ဖြစ်လာရ၏။ ကားရှေ့ခန်းထဲ ဘေးတိုက် အနေထားဖြင့် နူတ်ခမ်း ချင်း စုပ်နေရာမှ ခါးညွတ်ကာ ထောင်မတ်နေသော လီးအား ငုံ့စုပ် လိုက်သည်။ ပန်းရောင် သန်းကာ ကား ထွက်နေသော ဒစ်အား ဆွဲစုပ် ပြီး ပါးစပ်ထဲ ရောက်မှ လျှာဖျားလေးနှင့် လီးထိပ် အပေါက် လေးထဲ ထိုးကလိ ပေးပြန်၏။ ဒစ် အခြေအား သွားလေးဖြင့် မနာ့တနာ လေး ကိုက်ရင်း ဂွင်းမြန်မြန် ထုပေးရာ ခဏ အကြာ ဒေါက်တာ သိန်းဇံ တယောက် ထိုင်လျက် အနေ ထားဖြင့် ဖင်ကြွတက်လာ ပြီး ပိုးရတီ ပါးစပ်ထဲ လရည်များ ပန်းထုတ် လိုက်ရသည်။ပိုးရတီမှာ လီးအား ပါးစပ် ထဲမှ ထုတ်မပစ်ပဲ ထွက်လာ သမျှ လရည်များ ကုန်စင်အောင် မျိုချကာ ဒစ်အား ပါးခွက် အောင် စုပ်ပြီးမှ ထုတ်ပေးလိုက်လေတော့၏…ပြီးပါပြီ။